Na-ebu ma na-ebutu igwe Robotics CNC - Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd.
Ngalaba mbanye Honyen Robot Robot
Adreesị: No.8 Baijianshan Road, ụlọ ọrụ Feicai, Xuancheng obodo Anhui
Ndị China Industrial Robot TOP ika
Wepụ gafere430 n'ichepụta ihe isi ike
Nkwaghari:± 0.05-0.08mm 100% mere na CHINA
Akụkụ 1 Banyere Honyen
Anhui Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ na-ejikọta R&D, mmepụta, ahịa na ngwa nwere isi obodo edebanyere aha nke nde yuan 60.O nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200 na-ekpuchi ebe karịrị acres 120.Kemgbe mmalite ya, Yooheart enwetala ọtụtụ ihe mepụtara na ihe karịrị 100 ngwaahịa patent nwere ike siri ike, ngwaahịa anyị agafeela IOS9001 na asambodo CE, anyị nwere ike ịnye robots ụlọ ọrụ nwere ọrụ dị iche iche yana usoro azịza dabara adaba maka ọtụtụ ndị ọrụ.Mgbe ihe karịrị afọ iri nke nyocha na mmepe teknụzụ mmepe, "Honyen" na-emepụta ihe ọhụrụ na ịmepụta akara ọhụrụ "Yooheart" ugbu a, anyị na-eji ígwè ọrụ Yooheart ọhụrụ na-aga n'ihu. RV ndị na-emepụta onwe anyị mepụtara ihe isi ike karịa 430 ma nwee ihe isi ike mmepụta ihe. nwetara mmepụta ihe nrụpụta RV nke anụ ụlọ.
Yunhua kpebisiri ike iwulite akara roboti nke mbụ.Anyị kwenyere site na mbọ niile nke Yooheart, anyị nwere ike nweta "ụlọ ọrụ na-enweghị ọrụ"
Robot na-arụ ọrụ ọdụ Show
Ihe osise Robot ọdụ ọrụ
Robot Stamping ọdụ ọrụ
Robot Cutting Station
Robot Aluminom ịgbado ọkụ ọdụ ọdụ
Palletizing Robot ọdụ ọrụ
Ebe a na-egweri Robot
Laser Welding Robot ọdụ ọrụ
Nbudata na ibutu sistemu Robot na-arụ ọrụ ọdụ
TIG ịgbado ọkụ Robot ọdụ ọdụ
Ọrụ nka nka
Nkwado ahịa, N'ọrụ gị, n'afọ niile
100 ndị nkuzi
Nye mmezi ogologo oge, ọzụzụ na nkwalite
40 Vidiyo ọzụzụ
Ọ dị mfe ịmụta, na-azọpụta oge ọzụzụ na ihe isi ike ọzụzụ
Akụkụ 2 Okwu Mmalite
Nlebanya ọrụ nka na ụzụ Honyen Robot na nbudata sistemụ
Robot 6-axis na-ebunye ngwa ngwa ma na-ebutu ihe maka lathe CNC abụọ
Oke ngwaahịa kacha: <80g
Akụkụ CNC Machine Machine
Data nka na nkọwa
1, Ọnọdụ ọrụ
Ụdị ọrụ: ọkara akpaaka
2, Usoro teknụzụ
Hoister na-ebu ihe
Jiri aka gị wụsa ihe ahụ n'ime ebe a na-adọba ụgbọala
Igwe elu na-amalite ịhazi ngwa ngwa ngwa n'ahịrị ebufe maka robot ijide
3, Robot na-ebu na ebutu ihe
Robot na-ebu ma na-ebutu ihe.Claw B na-ewere ngwa lathe A
Gripper B ga-etinye ihe na tebụl ntụgharị, na-atụgharị tebụl
Gripper B na-ewere ihe nke tebụl ntụgharị, gripper A na-ewere ihe nke lathe B, gripper B na-etinye ihe ọhụrụ ahụ.
Gripper A na-etinye ihe ọhụrụ n'ime igbe
Tinyegharịa usoro ndị a dị n'elu
Mara: Emebere robot gripper maka ọdụ ọrụ abụọ, ọ nweghị nnyonye anya oge na nhazi nke 2 CNC lathes!
Ngwa na arụ ọrụ isi
Hositer izugbe anya
Eserese atụmatụ nke rotary clamping cylinder
Akụkụ 3 Robot Parameters
Nkebi nke 4 Nwụnye, Debugging na Ọzụzụ
Tupu nnyefe, a ga-achịkọta sistemu rọbọt ma na-anwale ya nke ọma na Anhui Yunhua Intelligent Equipment Co., LTD.Ndị ahịa ga-ebuga workpiece anyị ụlọ ọrụ maka tupu nnabata tupu ịhapụ factory.N'oge nnabata nke mbụ, ndị na-ahụ maka ndị ahịa ga-enweta ọzụzụ teknụzụ mbụ.
A ga-edobe atụmatụ nrụnye na ihe ndị a chọrọ n'aka onye ahịa ụbọchị 20 tupu echichi, onye ahịa ga-eme nkwadebe oge dị ka ihe ndị a chọrọ.Ụlọ ọrụ anyị ga-eziga ndị injinia iji wụnye na debug usoro na saịtị ndị ahịa, na zuru ezu mmemme na debugging, ndị ọrụ ọzụzụ na uka mmepụta mmepụta n'okpuru ọnọdụ na ndị ahịa hụ na zuru ezu debugging akụkụ.Ụlọ ọrụ anyị na-azụ ndị ọrụ injinia na teknụzụ nke mmemme, ọrụ na mmezi nke sistemụ robot maka ndị ahịa.Ndị na-azụ ọzụzụ kwesịrị inwe ụfọdụ ntọala kọmputa.
N'oge ntinye na nbipu, onye ahịa ga-enye ngwá ọrụ ndị dị mkpa, dị ka ngwá ọrụ ebuli elu, ụgbọala forklift, eriri, na hammer drill.A ga-enye ndị ọrụ enyemaka nwa oge n'oge nbudata na ntinye.
Yooheart na-ahụ maka ntụzịaka nke ntinye akụrụngwa, inye ọrụ na ọzụzụ ndị ọrụ metụtara ya, nlekọta ọzụzụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ.Onye na-achọ ọrụ ahọpụtara ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ, n'ikpeazụ iji nweta ọrụ nke ha na mmezi nke akụrụngwa.
Ọdịnaya Ọzụzụ: ụkpụrụ nhazi akụrụngwa, nchọpụta nsogbu eletrik nkịtị, mmeghe nkuzi mmemme bụ isi, nka mmemme na usoro mmemme akụkụ, mmeghe na ịkpachapụ anya panel arụ ọrụ, omume arụ ọrụ akụrụngwa, na Q&A.
Ọ bụrụ na izute ọnọdụ pụrụ iche, akụkụ abụọ ahụkwurịtara okwu mmezi
Akụkụ 5 chọrọ gburugburu ebe obibi
1.Voltage AC 380V, 3 frasi anọ waya usoro (adọ waya na ala waya)
2.Ugboro: 50Hz ±1Hz;
3. Oke mgbanwe mgbanwe:-10%～+10%
Ambient okpomọkụ: arụ ọrụ okpomọkụ 0 ~ 45 ℃
Mbupu na nchekwa okpomọkụ -20 ℃ 60 ℃
Ọnụego okpomọkụ 1.1 ℃ / min
RH: Ọtụtụ mgbe okpomọkụ ambient bụ 20% ~ 75% RH (enweghị oge condensation);Na obere oge (n'ime 1 ọnwa).Ihe na-erughị 95% RH (ọ bụrụ na enweghị condensation).
1. Gas na akụrụngwa nke ndị ọrụ na-eji ga-agbaso ụkpụrụ mba dị mkpa.
2. Ekwesịrị idobe isi iyi ikuku n'èzí na anya nke na-erughị mita 15 site na ọkụ ọkụ, na anya n'etiti gas na oxygen ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị mita 15.Isi iyi ikuku kwesịrị ịdị na-ekuku nke ọma, ma bụrụkwa ebe nchekwa ikuku na ndò.
3. Lelee ụzọ ikuku ọ bụla tupu ọrụ.Ọ bụrụ na enwere ntapu ikuku, a ga-edozirịrị ya tupu ịmalite ọrụ iji hụ na nchekwa.
4. Onye na-arụ ọrụ agaghị enwe ntụpọ mmanụ n'aka ya mgbe ọ na-edozi nrụgide ma na-agbanwe cylinder.
5. iru mmiri gburugburu: n'ozuzu, iru mmiri gburugburu ebe obibi bụ 20% ~ 75% RH (ebe enweghị condensation);Obere oge (n'ime 1 ọnwa) n'okpuru 95% RH (enweghị oge condensation).
6. Mgbakọ ikuku: 4.5 ~ 6.0kGF / cm2 (0.45-0.6mpa), mmanụ na mmiri akọrọ, ≥100L / min
7. Ntọala: ike kacha nta bụ C25, na ọkpụrụkpụ ntọala kacha nta bụ 400 mm
8. Vibration: Kwụsị pụọ na isi iyi nke ịma jijiji
9. Ike ọkụ: Ike ọkụ nke ihe niile arụpụtara ọkụ eletrik na ngwá electronic na-anabata 50HZ (± 1), 380V (± 10%) voltaji AC nke atọ, na-enye ohere mgbanwe: -10% ~ + 10%, hụ na ọkwa ọkụ eletrik. grounding.
Ọrụ ndị ahịa na-enye na saịtị:
1. Nkwadebe niile dị mkpa tupu ebupu, dịka ntọala, nkwadebe mpụga dị mkpa, idozi AIDS, wdg.
2. Nbudata na njem ndị ahịa na saịtị, enyemaka nwa oge, wdg.
Nkeji 6 Ọrụ Nkwado Ogo
Ogologo oge nkwa nke akụkụ bụ isi nke akụrụngwa a bụ 1 afọ ma ọ bụ awa 2550, nke ọ bụla na-abịa.
Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd nwere ike ịrụkwa ma ọ bụ dochie akụkụ n'efu (EXW) ma ọ bụrụ na ọ mebiri emebi n'iji ya eme ihe yana ngwa ahụ dị n'ime oge ikike (ihe oriri, ngwaahịa mmezi, nchekwa, ihe nrịbama na ihe oriri ndị ọzọ nke anyị họpụtara. ụlọ ọrụ adịghị n'okpuru oke a).
N'ihi na yi akụkụ na-enweghị akwụkwọ ikike, anyị ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa ndị nkịtị ọrụ ndụ na ọkọnọ price nke yi akụkụ, na akụrụngwa nwere a kwụsiri ike ọkọnọ ọwa nke akụrụngwa ruo afọ ise.
Mgbe njedebe nke oge akwụkwọ ikike, ụlọ ọrụ anyị ga-anọgide na-enye ọrụ a na-akwụ ụgwọ ogologo oge, na-enye nkwado teknụzụ zuru oke na ngwa ngwa achọrọ.
Akụkụ 7 Nyochaa na Ọkọlọtọ nnabata
Tupu-elele na nnabata
Nlele mbụ na nnabata ga-adị na Anhui Yunhua Intelligent Co,.Ltd, nke ndị ọrụ dị mkpa sitere n'akụkụ abụọ ga-abịa.A ga-eduzi nlele mbụ na nnabata dị ka isi ziri ezi nke workpiece nyere site n'aka ndị ahịa iji nweta ebumnuche ọrụ, a ga-enyerịrị akụkọ nyocha tupu elele na nnabata, a ga-ebuga ngwongwo ndị ahụ mgbe ha gafere nnabata ahụ.Iji hụ na nlele mbụ na nnabata dị mma, onye ahịa ga-enye 4 setịpụ akụkụ mapụtara +1 nke ngwaahịa emechara maka mmepụta nkịtị.
Nyocha ikpeazụ na nnabata
A na-anabata nnabata ikpeazụ site na nyocha ngalaba ndị ahịa (gụnyere nhazi akụrụngwa, nyocha ọdịdị na ọrụ enweghị ibu, wdg), na njikwa usoro njikwa ihe ngosi ngosi.Mgbe echichi na nbipu niile tozuru oke, nnabata ikpeazụ nke akụrụngwa ga-arụ ọrụ na mbinye aka nke ndị nnọchi anya nnabata nke akụkụ abụọ ahụ.
Isi njirisi na ndabere maka nnabata ikpeazụ bụ ndị a:
1. 4 isi ihe dị n'ime nkwekọrịta nkwekọrịta maka ịrụ ọrụ na-aga n'ihu, na àgwà ngwaahịa na-ezute ihe ndị a chọrọ.
2. Ngwa ahụ ga-emezu ihe achọrọ nke ụkpụrụ mba dị mkpa na nkwekọrịta teknụzụ.
Nkebi 8 faịlụ nwere ọdụ
Eserese nwụnye: Nrụpụta ihe nrụpụta nke ntọala akụrụngwa, eserese nrụnye akụrụngwa
Eserese ihe osise: eserese akụrụngwa n'ozuzu, eserese wiring
Ntuziaka ntuziaka: ntuziaka ọrụ na mmezi, ntuziaka ntuziaka Robot
Ihe mgbakwunye: ndepụta mbupu, asambodo, kaadị ikike